တႈဃုထ႕ထီဥသီခါကရ႕ခိဥအသီ လ႕ Lashio သီခါကရ႕ခိဥဟီဥက၀ီၚ တႈကစီႈ | Radio Veritas Asia
ပႈပါ Francis ဃုထ႕ထီဥ၀ဲသီခါ Fr. Lucas Dau Ze Jeimphaung SDB,ဒ္သိးအကဘဥတႈပဏထီဥအီၚ ဆူသီခါကရ႕ခိဥအလီႈအဂီႈနဥ့လီၚ’ ဆ႕ကတီႈအခဲအံၚ သီခါအံၚမ့ႈ၀ဲ ပွၚဘဥမူဘဥဒါလ႕ တႈကြႈထြဲတႈမၚလိတႈအလီႈ (Philosophate)လ႕၀့ႈ ပေႈ့အူလြဥ့နဥ့လီၚ’
သီခါ Fr. Lucas အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဖဲ Hpa Hping အသ၀ီယ လ႕ Lashio သီခါကရ႕ခိဥဟီဥက၀ီၚယ လ႕ဎိၚကီႈစဲႈယ ဖဲ ၁၉၆၂ လါအီးကထိဘ႕ဥ ၁၈ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’ မၚလိမၚဒိးအသးလ႕တႈမၚလိယ ဒ္စံး၀ဲလ႕ ကိၚလၚ၀ါအက်ိဏ (Philosophical Study) ဖဲ (အနီးစခန္း) လ႕၀့ႈ ပေႈ့အူလြဥ့ယ ဒီးမၚလိကဒီးအသး ဘဥဃးဎြၚဂ့ႈပီညါ (Theological Studies) လ႕၀့ႈတကူဥနဥ့လီၚ’
အ႕ဥလီၚအီလီၚအသး ဒ္သိးအကဟ့ဥလီၚအသး လ႕အကရ႕ကရိအပူၚ (Religious Vows) ဖဲ ၁၉၉၃ လါမ့ၚ ၆ သီနဥ့လီၚ’ ဘဥတႈပဏထီဥအီၚသူသီခါအလီႈ ဖဲ ၁၉၉၆ လါအ့ၿဖ့ ၂၁ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’
စးထီဥဖဲ ၂၀၀၃ တုၚလ႕ ၂၀၀၆ အနံဥသ့ဥတဖဥအတီႈပူၚ မၚလိမၚဒိးအသးလ႕ ကီႈ Philippines ဒီးမၚလ႕မၚပွဲၚ၀ဲအတႈမၚလိ ဘဥဃးဒီးတႈဟ့ဥကူဥဒူဥဖိထ႕ဖိ (Family Counselling) ဖဲ ၂၀၀၄ လ႕ Jesuit အဖေႈစိမိနဥ့လီၚ’
စးထီဥလ႕အကဲထီဥသီခါ၀ံၚအလီႈခံ အတႈဟံးထီဥဖီဥထီဥ၀ဲမူဒါသ့ဥတဖဥ မ့ႈ၀ဲ
၁၉၉၆ တုၚလ႕ ၂၀၀၃ ဒ္အမ့ႈ ပွၚဘဥမူဘဥဒါဘဥဃးတႈအီဥတႈအီ ဖဲလ႕တႈသိဥလိနဲဥလိတႈအလီႈ လ႕ Nazarethယ Anisakan, Pyin Oo Lwin တႈမၚလိမၚဒိးအလီႈယ
မၚလိမၚဒိးအသးလ႕ ကီႈ Philippines စးထီဥဖဲ ၂၀၀၃ တုၚလ႕ ၂၀၀၆
စးထီဥလ႕ ၂၀၀၆ တုၚလ႕ ၂၀၁၂ အနံဥအတီႈပူၚ ဖံးတႈမၚတႈဒ္ ဟီဥက၀ီၚအသီခါ (Parish Priest) လ႕တႈလီႈ Annisakanယ
လ႕နဥ့အမဲဏညါ စးထီဥဖဲ ၂၀၀၈ တုၚလ႕ ၂၀၁၁ အတီႈပူၚ အိဥ၀ဲဒီးမူဒါလ႕ သူဥဘီဥသးစႈသ့ဥတဖဥအဂီႈ (Youth Ministry)
စးထီဥဖဲ ၂၀၁၂ တုၚလ႕ ၂၀၁၇ အနံဥအတီႈပူၚ အိဥ၀ဲဒီးမူဒါလ႕ Wa အကလုႈဒူဥ (Wa Mission) ဖဲလ႕ Lashio သီခါကရခိဥဟီဥက၀ီၚအပူၚယ
လ႕ခံဒိးနဥ့ဘဥ၀ဲမူဒါ ဘဥဃးဒီး တႈတီခိဥရိဥမဲ Salesian Philophate လ႕၀့ႈ Pyin Oo Lwin စးထီဥဖဲ ၂၀၁၇ အနံဥလံၚလံၚနဥ့လီၚ’
Source: Agenzia Fides 18 October 2019
The Holy Father has appointed as Coadjutor Bishop of the diocese of Lashio, Myanmar, the Reverend Father Lucas Dau Ze Jeimphaung, S.D.B., currently provincial counsellor and Rector of the Salesian Philosophate of Pyin Oo Lwin.
ကီႈပဎီၚဒီဘ့ဥ ဖံ၀ါ ပွၚအိဥသဘ်႔လ႕ (CRCM) ကရုႈသ့ဥတဖဥ ဖဲလ႕ Covid-19 အဆ႕ကတီႈအခါ အ၀ဲသ့ဥဟ့ဥမၚစ႕ၚ ဟ့ဥမၚဘူဥ၀ဲ တႈၾတီသဒ႕သး တႈကူတႈကၚယတႈကးတံႈနါစ့ၚယသ့ဥတဖဥ တႈကစီဥ’ ၂၆/၅/၂၀၂၀
မ့ႈလ႕ (တီၚအိဥကလၚ အတႈဆါဟံဥ ပွၚနဲဥလီၚတႈ အတႈထုးစုနဲဥက်ဲအဃိ ကဲဥသလံး ပွၚသးစႈဖိသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈဆွ႕လီၚအီၚလ႕ ကလဲၚဒီးမၚ၀ဲ Volunteer တႈမၚဆူ (တီၚအိဥကလးတႈဆါဟံဥ) တႈကစီဥ 23.4.2020
တႈဘူဥတႈဘါကရ႕ အပွၚမၚတႈဖိ ၄၂ ဖု ဒီးထံကီႈ ၁၄ဘ့ဥ ဃ့ကညး၀ဲဒဥလ႕ ပတႈအိဥမူခါဆူညါအဂီႈ သုတမၚ၀ဲဒဥရ့ဥသိအတႈတိာ္က်ဲၚတဂ့ၚအဂီႈန႔ဥလီၚ.
ကီႈ (Asia) အပီဥလဲဥပူၚ တႈလီီႈတတီၚ ဖဲလ႕တႈမၚကဆွဲကဆွီ၀ဲဒဥအီၚအကတီႈန့ဥလီိၚ. Shuttter Stock.com